Kubanjwe ijoni ngenxa yophango! | Ilisolezwe
Kubanjwe ijoni ngenxa yophango!
Iindaba / 21 April 2017, 2:37pm / Unathi Tuta
Kapa: Yindoda eneminyaka engamashumi amane ubudala eyayisakuba lijoni ebanjiweyo ngokoyamene nesiganeko sokuphangwa kwisikhululo samajoni i-9SAI eKhayelitsha.
Ingxelo esuka kumapolisa eli phondo leNtshona Koloni idiza ukuba iphulo lophando ngesi siganeko ebelikhokelelwa licandelo loongqondo-ngqondo likhokelele ekubanjweni kwalo mrhanelwa kwilokishi yaseKhayelitsha ngentsasa yanamhlanje.
Oku kulandela isiganeko sokuphangwa kwisikhululo samajoni i9SAI kufutshane nengingqi yaseTown Two eKhayelitsha. Ingxelo zidiza ukuba kwafika amadoda amahlanu exhobile angena ngenkani kumasango esa sikhululo, nalapho oyise ngamandla oonogada bebathathela umbayi-mbayi oluhlobo lwe-R4 nesingxobo seembumbulu sineembumbulu.
Abarhanelwa bathathe aba nogada babangenisa ngaphakathi kwisikhululo samajoni nalapho bafika bohlula amajoni amahlanu kwigumbi loonogada, apho banyanzelise ukuba bavule indawo ekhuselekileyo egcina izixhobo.
Apho bathatha abanye oombayimbayi abaluhlobo lwe-R4 abahlanu. Ziphelele izixhobo abazithathayo aba, ngoombayimbayi abaluhlobo lwe- R4 abathandathu, ikhasethi leembumbulu kwaneshumi le 5.56mm.
Usomlomo wamapolisa kweli phondo uKapteni Fredericks Van Wyk, uthi “abecuphi bazakuqinisekisa ukumhlohla ngemibuzo umrhanelwa kwaye luzakuqhutywa uphando.” Akukaziwa ukuba uzakubekwa ityala okanye uzakuvela nini enkundleni.